Himalaya Dainik » प्रेमिकासँगै नहरमा होलिएका सैनिक जवान ‘मृत’ फेला, जिवितै उद्दार गरेकी प्रेमिकाले दिइन यस्तो बयान !
प्रेमिकासँगै नहरमा होलिएका सैनिक जवान ‘मृत’ फेला, जिवितै उद्दार गरेकी प्रेमिकाले दिइन यस्तो बयान !
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१ भाँसीस्थित महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा शुक्रबार हा’म फा’लेर बे पत्ता भएका २३ वर्षीय राकेश चौधरीको श व प्रहरीले आज फेला पारेको छ ।
हा’मफा’लेको स्थानभन्दा झण्डै १२ मिटरको दूरीमा चौधरीको श व फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर थापाले बताए। मृतकको श व परीक्षणका लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको छ । चौधरीसँगै नहरमा हामफेकी १९ वर्षीया रेनु चौधरीको भने स्थानीय बासिन्दाले शुक्रबार जीवितै उद्धार गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमर थापाका अनुसार नहरमा प्रेमिकासंगै नहरमा होलिएका रोकेशको २२ घण्टापछि शनिवार बिहान श व भेटिएको हो। प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले उक्त स्थान भन्दा केही तल युवकको श व फेला पारेको हो।
प्रहरीका अनुसार नहरमा सँगै होलिएका युवायुवती प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए। मृ तक २३ वर्षीय राकेश चौधरी नेपाली सेनामा कार्यरत थिए। उनी बिदामा घर आएका थिए। युवती भने अध्ययरत रहेकी थिइन्। उनीहरुबीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार युवतीले हा’मफा’लेपछि युवकले पनि नहरमा हा’म फा’लेका थिए। प्रेममा केही खटपट आएपछि घटना भएकोे प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनका अनुसार युवायुवतीको घर परिवार, जी वितै उद्धार गरिएकी युवती लगायतसँग सोधपुछ चलिरहेको छ।
सोही नहर भएर गइरहेका बेला स्थानीय सुनिल चौधरीले नहरमा होलिएको देखेपछि युवतीलाई नहरबाट बाहिर निकालेको बताए। ‘पानीमा टाउको मात्रै देखिएको थियो। ‘उनले भने, ‘मैले उनलाई निकाले, पेटमा पानी भरिएर वे’होस भएकी युवतीको १०/१५ मिनेटमा होस आएपछि उनले नै युवकले पनि आफूसँगै नहरमा हा’म फा’लेको बताईन् ।
‘अ-श्लिल’ भिडियो बनाएर आफ्नो वेबसाइटमा हालेपछि यी सुन्दरी पक्राउ
२० मिनेटमै छाला चम्काउने घरेलु विधि
मोबाइलबाट फेला पर्‍यो ‘क्लु’, परिचितबाटै भागरथीको ‘हत्या’को आशंका
‘राजकुमारी’ महशुश गर्दै साम्राज्ञी देखिइन् यस्तो लुक्समा [फोटो फिचर]